ဆကျနှယျမှု အခွပွေု ပရျောဖကျရှငျနယျ ဖှံ့ဖွိုးတိုးတကျမှု
သငျတနျး စပှနျဆာ အဖှဲ့အစညျးမြား
အှနျလိုငျး အသကျမှေးဝမျးကြောငျး လမျးညှနျ
သငျ၏ အောငျမွငျမှု အသငျး
“ ချစ်ခင်မှု၊ စိတ်ရှည်သည်းခံမှုနှင့် စာနာထောက်ထားမှုတို့ရှိသည့် နယ်ပယ်သို့ လာခဲ့ပါ။ သူတို့၏ဘ၀ လေးတွေကို့ အကျိုးသက်ရောက်စေသောကြောင့် သူတို့က ကျွန်ုပ်တို့ကို ချစ်တယ်၊ ရှာဖွေတယ်”
Latisha Schauerမိသားစု ကလေးထိန်း ပိုင်ရှင်
ကနဦး ကလေးပညာရေး အလုပ်အကိုင်များကို ပေးအပ်ခြင်း
သင့်ကလေး၊ မိသားစုများနှင့် သင်၏ အသိုင်းအဝိုင်းအတွက် ပိုမိုတောက်ပသော အနာဂတ်ကို ဖန်တီးလိုက်ပါ!
Scholarships & Grants အဆင့်မြင့် ပညာရေးECE အရင်းအမြစ်များ JoinaCommunity
T.E.A.C.H. Early Childhood Minnesota သည် ကနဦးကလေးဘဝနှင့် ကျောင်းနေအရွယ်ကလေးများအား ပညာရေး၊ လျော်ကြေးနှင့် ကောလိပ်ခရက်ဒစ်များ ရယူခြင်းဖြင့် ၎င်းတို့၏ နယ်ပယ်အတွင်း အားစိုက်ထုတ်မှုကို တိုးမြှင့်ပေးသည့် ပညာသင်ဆုအစီအစဉ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ပညာသင်ဆု အမျိုးအစား နှစ်မျိုးရှိပါသည်။ ကနဦးကလေးဘဝ သို့မဟုတ် ကျောင်းအရွယ်စောင့်ရှောက်မှုပေးသူ ပညာသင်ဆုနှင့် ကနဦး ကလေးဘဝ သင်တန်းဆရာ ပညာသင်ဆုများ ဖြစ်သည်။
R.E.E.T.A.I.N. ဘောနပ်စ်များသည် ပညာရေးနှင့် ပရော်ဖက်ရှင်နယ် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုများ ဆက်လက် လုပ်ဆောင်ခြင်းအားဖြင့် အားစိုက်ထုတ်မှုကို ပြသခဲ့သည့် ကလေးစောင့်ရှောက်မှုပညာရှင်များကို ဆုချသည်။ R.E.E.T.A.I.N. ဘောနပ်စ်များကို အစီအစဉ် အထောက်အပံ့၊ လေ့ကျင်ရေးနှင့် ပုဂ္ဂိုလ်ရေး အသုံးစရိတ်များအတွက် အသုံးပြုနိုင်သည်။
CDA Awards သည် တစ်နိုင်ငံလုံးအသိအမှတ်ပြု ကလေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဆိုင်ရာ အထောက်အထား Child Development Credential (CDA)အတွက် ပံ့ပိုးပေးသူများအား လိုအပ်သော သင်တန်း၊ လျှောက်လွှာနှင့် သက်တမ်းတိုးခြင်းများ အတွက် ပေးချေရန် ကူညီသည်။
နိုင်ငံခြားအသိအမှတ်ပြု အကဲဖြတ်ခြင်းဆိုင်ရာ ပညာသင်ဆုများသည် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု ပြင်ပရှိ အထက်တန်းကျောင်း သို့မဟုတ် အဆင့်မြင့်ပညာရေး သင်တန်းများ တက်ရောက်အောင်မြင်ပြီးသော ကနဦးကလေးဘဝ ကျွမ်းကျင်သူများအား ၎င်းတို့၏ပညာရေးနှင့်ကျွမ်းကျင်မှုကို အသိအမှတ်ပြု နိုင်ရန်အတွက် အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ်ကို ပေးချေခြင်းဖြင့် ကူညီပေးသည်။
ကောလိပ်ကျောင်းတက်ခြင်းသည် ဈေးကြီးနိုင်သည်။ အောက်ပါတို့မှာ Minnesota တွင် ရရှိနိုင်သော ပညာသင်ဆုစာရင်း၏ အကျဉ်းချုံးဖြစ်သည်။
အထက်တန်းကျောင်းတွင် တက်ရောက်သင့်သည့် အတန်းများ၊ အထက်တန်းကျောင်းတွင် ကောလိပ် ခရက်ဒစ်များ ရရှိနိုင်ပုံ သို့မဟုတ် အရွယ်ရောက်ပြီးသူ ကျောင်းသားတစ်ယောက် အနေဖြင့်မည်သို့ အောင်မြင်နိုင်ကြောင်းကို လေ့လာပါ။
ဒေသအလိုက်နှင့် နိုင်ငံအလိုက် ကောလိပ်များကို စူးစမ်းလေ့လာပါ။ ကောလိပ် လျှောက်ထားရန် အချက်အလက်များ ရှာဖွေပါ။
အခြေခံဘဏ္ဍာရေး အကူအညီများ၊ ထောက်ပံ့ငွေများနှင့် ပညာသင်ဆုများ၊ အခြားအထောက်အပံ့များနှင့် ကျောင်းသား ချေးငွေများအကြောင်း ရှာဖွေပါ။
Minnesota ဆရာ၊ ဆရာမ အင်အား မလုံလောက်ခြင်း ချေးငွေအစီအစဉ်
Minnesota ဆရာ၊ ဆရာမ အင်အား မလုံလောက်ခြင်း ကျောင်းသား ချေးငွေအစီအစဉ်ကို Minnesota ရှိ ဆရာ မလုံလောက်သည့်နေရာတွင် စာသင်ခန်း ညွှန်ကြားချက်ပေးသော ဆရာများအား ချေးငွေပြန်လည် ပေးဆပ်ရန်အတွက် တည်ထောင်ခဲ့သည်။ လျှောက်ထားရန် အရည်အချင်း ပြည့်မှီမှု ရှိမရှိ၊ လျှောက်ထားခြင်းနှင့် ရွေးချယ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်၊ ငွေမည်မျှ ရရှိနိုင်ကြောင်းကို ကြည့်ပါ။
Achieve – ပရော်ဖက်ရှင်နယ် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု ဆိုင်ရာ MN စင်တာ
Achieve သည် အသင်းဝင်လျှောက်လွှာကို တင်သွင်းရန်နှင့် သင်၏ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လိုအပ်ချက်များနှင့် ရည်မှန်းချက်များကို အခြေခံ၍ သင့်ကိုယ်ပိုင် လျှောက်လွှာ အထောက်အပံ့ကိုပေးရန် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု စနစ်ကို အသုံးပြုသည်။
ကနဦး ပညာရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးစင်တာ
ကနဦး ပညာရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးစင်တာ Center for Early Education and Development (CEED) ကနဦးပညာတတ်များ၊ စောင့်ရှောက်သူများ၊ လေ့ကျင့်သူများနှင့် အစီအစဉ်များသည် ၎င်းတို့ ဝန်ဆောင်မှုပေးသည့် မွေးကင်းစကလေးများနှင့် ကလေးငယ်များအတွက် အကောင်းဆုံး ရလာဒ်များရရှိရန် ကူညီသည်။
အလုံးစုံ ကလေးစောင့်ရှောက်ရေး စင်တာ
အလုံးစုံ ကလေးစောင့်ရှောက်ရေး စင်တာ Center for Inclusive Child Care (CICC) သည် Minnesotaတစ်လျှောက်လုံး ကလေးစောင့်ရှောက်ရေး အစီအစဉ်များအတွက် အထောက်အပံ့၊ လေ့ကျင့်ရေး၊ မော်ဒယ်လ်နှင့် အရင်းအမြစ်များ အပါအ၀င် အခမဲ့ဆက်သွယ်မှုဆိုင်ရာ အခြေခံ ပရော်ဖက်ရှင်နယ် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု (RBPD) ကိုထောက်ပံ့ပေးသည်။
ကလေးစောင့်ရှောက်ရေး အထောက်အကူပြု အစီအစဉ်၊ Minnesota လူမှုဝန်ဆောင်မှုများဌာန
ကလေးစောင့်ရှောက်ရေး အထောက်အကူပြု အစီအစဉ်က မိဘများအား အလုပ်အကိုင် သို့မဟုတ် ပညာရေးကို ရယူကာ အလုပ်အကိုင် ရရှိစေရန် ဝင်ငွေနည်းပါးသော မိသားစုများအား ကလေးစောင့်ရှောက်မှုကို ပေးချေပေးခြင်းဖြင့် ကလေးများအား ကောင်းစွာကြည့်ရှုစောင့်ရှောက်ရန်နှင့် ကျောင်းတက်ရန် ပြင်ဆင်ပေးနိုင်ရန်အတွက် ငွေကြေးအကူအညီ ပေးသည်။
Minnesota၏ ကလေးစောင့်ရှောက်မှု သတိပြုမှု
Minnesota၏ ကလေးစောင့်ရှောက်မှု သတိပြုမှုက ကလေးစောင့်ရှောက်မှု ပေးသူများ၏ ဖွံ့ဖြိုးမှုကို ထောက်ပံ့ခြင်းနှင့် မိသားစုများကို အရည်အသွေးရှိသော စောင့်ရှောက်သူနှင့် ချိတ်ဆက်ပေးခြင်းဖြင့် ကလေးများအား ကျောင်းနှင့် ဘဝတွင် အောင်မြင်မှုရစေသည်။
Develop သည် ကနဦး သင်ယူမှုနှင့် ကျောင်းနေအရွယ် စောင့်ရှောက်မှုတို့ကို ပံ့ပိုးရန် ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဆိုင်ရာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့် အရည်အသွေးမြှင့်တင်ခြင်း ကိရိယာများကိုပေးသည်။
First Children’s Financeသည် ၀င်ငွေနည်းပါးသောမိသားစုများနှင့် အလယ်အလတ် ၀င်ငွေရှိသော မိသားစုများအတွက် အရည်အသွေးမြင့် ကလေးစောင့်ရှောက်ရေး လုပ်ငန်းများအတွက် ချေးငွေများနှင့် စီးပွားရေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဆိုင်ရာ အကူအညီများကို ပေးသည်။
Minnesota ပရော်ဖက်ရှင်နယ် ပညာပေးလိုင်စင်နှင့် စံချိန်စံညွှန်းဘုတ်အဖွဲ့ Professional Educator Licensing and Standards Board (PELSB)
PELSB သည် Minnesotaရှိ ပညာပေးလိုင်စင် ချပေးခြင်းနှင့် ပတ်သက်သော သတင်းအချက်အလက်များကို ပေးသည်။ လိုင်စင်လျှောက်ထားခြင်း၊ ကြိုတင်ပြင်ဆင်ခြင်း အစီအစဉ်ကို ရှာဖွေပါ သို့မဟုတ် လိုအပ်ချက်များကိုလေ့လာပါ။
Parent Aware သည် Minnesotaရှိ ကလေးများအတွက် ပိုမိုကောင်းမွန်သော ဘ၀များဖန်တီးရန် ပရိုဂရမ်များအား သူတို့၏အရည်အသွေး တိုးတက်စေရန် အခွင့်အလမ်းများကို ရှာဖွေပေးခြင်း၊ အောင်မြင်ရန် လိုအပ်သည့် ကိရိယာများနှင့် အရင်းအမြစ်များဖြင့် ကူညီခြင်း၊ သူတို့၏အလုပ်ကို ဂုဏ်ပြုခြင်းဖြင့် ကူညီပေးသည်။
ကလေးငယ်များ၏ပညာရေးအတွက် Minnesota အသင်းအဖွဲ့
ကလေးငယ်များ၏ပညာရေးအတွက် Minnesota အသင်းအဖွဲ့ Minnesota Association for the Education of Young Children (MnAEYC) နှင့် Minnesota ကျောင်းနေအရွယ် စောင့်ရှောက်မှု မဟာမိတ် Minnesota School-Age Care Alliance (MnSACA) အဖွဲ့ဝင် ၇၀၀ ကျော် ပါဝင်သည့် ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အသင်းအဖွဲ့များဖြစ်သည်။
ကလေးစောင့်ရှောက်မှုပညာရှင်များအတွက် Minnesota အသင်းအဖွဲ့
ကလေးစောင့်ရှောက်မှုပညာရှင်များအတွက် Minnesota အသင်းအဖွဲ့ Minnesota Association of Child Care Professionals (MACCP) သည် Minnesota ရှိလိုင်စင်ရ မိသားစုကလေးစောင့်ရှောက်မှုပေးသူများ စေတနာ့ဝန်ထမ်းအသင်းအဖွဲ့။
Minnesota ကလေးစောင့်ရှောက်ရေးအသင်း Minnesota Child Care Association (MCCA) သည် Minnesota တလျှောက် လိုင်စင်ရ ကလေးစောင့်ရှောက်ရေး စင်တာများကို ကိုယ်စားပြုသည့် နိုင်ငံတစ်ဝှမ်း အဖွဲ့အစည်းဖြစ်သည်။
Minnesota ကလေး စောင့်ရှောက်သူ သတင်းအချက်အလက် ကွန်ယက်
Minnesota ကလေး စောင့်ရှောက်သူ သတင်းအချက်အလက် ကွန်ယက်Minnesota Child Care Provider Information Network (MCCPIN) သည် မိသားစု ကလေးစောင့်ရှောက်သူများ ဦးဆောင်ထားသော မိသားစုကလေးစောင့်ရှောက်မှု ၀န်ဆောင်မှုပေးသော အဖွဲ့အစည်းတစ်ခု ဖြစ်သည်။ MCCPIN ၀က်ဘ်ဆိုင်တွင် ဒေသခံ အသင်းအဖွဲ့များစာရင်းတစ်ခု ပါဝင်သည်။
အမျိုးသား ကလေးငယ်များ ပညာရေး အစည်းအရုံး
အမျိုးသား ကလေးငယ်များ ပညာရေး အစည်းအရုံး National Association for the Education of Young Children (NAEYC) သည် ကနဦးကလေးဘဝ အလေ့အကျင့်၊ မူဝါဒနှင့် သုတေသနများကို ချိတ်ဆက်ပေးခြင်းဖြင့် မွေးကင်းစမှ အသက် (၈) နှစ်အောက်အထိ ကလေးငယ်များအားလုံးအတွက် အရည်အသွေးမြင့်မားသော ကနဦးသင်ယူမှုကို မြှင့်တင်ရန် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသော ပရော်ဖက်ရှင်နယ် အသင်းဝင် အဖွဲ့အစည်းတစ်ခု ဖြစ်သည်။
ကနဦး ကလေးပညာရေး နယ်ပယ်တွင် မရည်တွက်နိုင်သော အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း တိုးတက်မှုနှင့် အခွင့်အလမ်းများရှိပါသည်။ ရရှိနိုင်သည့် အလုပ်အကိုင်အများအပြားကို လေ့လာရန် အောက်ပါကိရိယာများကို သုံးပါ။
အွန်လိုင်း အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း လမ်းညွှန်
ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ကိရိယာကို လေ့လာပြီး ကလေးဘဝ စောင့်ရှောက်မှုနှင့် ပညာရေးအတွက် အောင်မြင်သော အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှုကို မည်သို့စီစဉ်နိုင်ကြောင်း ရှာဖွေပါ။ အောက်ပါတို့ကို နှိပ်ခြင်းဖြင့် –
Develop ၏ ITNA (တစ်ဦးချင်း လေ့ကျင့်သင်ကြားမှု လိုအပ်ချက်အကဲဖြတ်ခြင်း Individual Training Needs Assessment) ကိရိယာကို အသုံးပြုပြီး သင်၏အားသာချက်ကို ခွဲခြားသတ်မှတ်ပါ
ပညာရေးနှင့် လေ့ကျင့်ရေး အရင်းအမြစ်များကို ရှာဖွေပါ
သင်ရယူလိုသည့် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း ရွေးချယ်မှုများကို ရှာဖွေပါ
အသက် မွေးဝမ်းကျောင်းများ ရှာဖွေရန်
Minnesota အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းနှင့် ပညာရေး ရှာဖွေမှုသည် အသုံးပြုရန် ရိုးရှင်းလွယ်ကူစော ကိရိယာဖြစ်သည်။ သင့်အနေဖြင့် အောက်ပါတို့ကို လုပ်ဆောင်နိုင်သည်-
ကျယ်ပြန့်သော အလုပ်အကိုင်များကို ရှာဖွေပါ
Minnesotaဒေသအတွက် လစာနှုန်းထားများနှင့် လူ့စွမ်းအား လိုအပ်ချက်များကို စစ်ဆေးပါ
ပညာရေး လိုအပ်ချက်များအကြောင်း လေ့လာပါ